तीन वर्षसम्म पनि बनेन पुल | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / फिचर समाचार / तीन वर्षसम्म पनि बनेन पुल
तीन वर्षसम्म पनि बनेन पुल
Posted by: युगबोध in फिचर समाचार March 16, 2019	0 42 Views
प्युठान। झिमरुक गाउ“पालिका–५ ढाडा स्थित झिमरुकखोलामा पुल बन्न सकेको छैन। ०७२ साल असोजमा सम्झौता भई निर्माण कार्य शुरु भएको तीन वर्ष बित्दासमेत पुल निर्माण नभएको हो। समयमै पुल निर्माण हुन नसक्दा यस क्षेत्रका स्थानीयलाई खोला वारपार गर्न समस्या भएको छ। वर्खाको समयमा निकै सास्ती बेहोर्ने यहँ“का स्थानीय पुल बन्न लागेपछि खुशी भए पनि बीचमै अलपत्र पर्दा दुःखी भएका छन्।
पुल निर्माण नहुदा यस क्षेत्रका बृद्धबृद्धा, महिला, बालबालिका र विद्यार्थीलाई बढी समस्या परेको छ। झिमरुक गाउपालिका ५, ७ र ८ का स्थानीयस“गै नौबहिनी र गौमुखी गाउपालिकाका केही स्थानीयलाई खोला वारपार गर्न सहज होस् भनेर पुल निर्माण कार्य थालनी गरिएको हो।
खोलामा पुल निर्माण हुन नसक्दा यस क्षेत्रका स्थानीयले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको छ। पुल नहु“दा जनतालाई ठूलो दुःख भएको स्थानीय हरि जिसीले बताउनुभयो। वर्षेनि एक÷दुईजनाको ज्यान जाने गरेको उहा“ले बताउनुभयो। झिमरुक गाउ“पालिका अन्तर्गत वडा नं. ७ र ८, त्यस्तै गौमुखी गाउ“पालिकाको वडा नं. ६ लगायतका वडाहरुका स्थानीयहरु पुल नबन्दा छ महिना विकट हुने बताउनुभयो। पुल नबन्दा यहा“का स्थानीयको बसाइसराइको दरसमेत बढेको छ।
स्वालीघारी–ढाडा पुल नबन्नुमा स्थानीय बासिन्दाहरुको भनाइअनुुसार सम्बन्धित निकायलाई दोषी ठानेको उहाले बताउनुभयो। पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा डेलिगेशन जादा ठेकेदारले आफूले उक्त काम गर्न नसक्ने कुरा व्यक्त गरेको तर प्राविधिक पक्षबाट हेर्दा इञ्जिनियरले भने बमोजिम ठेकेदारले गर्न नसकेको बताउने उहाले बताउनुभयो। दुबै पक्षले एक अर्कोलाई दोष दिदा उक्त पुल निर्माण हुन नसकेको उहाले बताउनुभयो।
कार्तिकदेखि तुषारा, टिमुरचौर, पुजा, लिवाङमा विभिन्न गाउ“मा चल्ने सवारी साधन नियमित चल्दै आए पनि असारदेखि नदीका कारण यातायात ठप्प भई आगमनमा समस्या हुने उहा“ले बताउनुभयो। यातायातका साधन नचल्दा लिवाङ, त्ुाषारालगायतका स्थानीयहरु पैदल हिडेर व्यापारिक केन्द्र बाग्दुला, खंलगा, जुम्री विजुुवार आउनुपर्ने बाध्यता छ। त्यस्तै यस क्षेत्रका स्थानीयहरुलाई गाउपालिकाको केन्द्र मच्छी आउन समेत समस्या छ। यस क्षेत्रका स्थानीयहरुले यस क्षेत्रका जनताको हितका लागि छिटो निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन्।
साविकको जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयबाट भ्याटबाहेक साढे तीन करोड लागतमा पुल निर्माण गर्न सम्झौता भएको निर्माण व्यवसायी बालाजु श्रेष्ठले बताउनुभयो। ०७४ असोजसम्म पुल निर्माण कार्य सकाउनुपर्नेमा डिजाइनरको लापरवाहीले पुल निर्माण कार्य अलपत्र भएको उहा“ले बताउनुभयो। एक सय २ मिटर लामो पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको उहा“ले बताउनुभयो।
पुल निर्माणको ढिलाइको विषयमा निर्माण कम्पनीसग बुझ्दा ओपन फाउण्डेसन अगाडि बढाउन नसकिएका कारण काम अगाडि बढाउन नसकिएको निर्माण व्यवसायी श्रेष्ठले बताउनुभयो। ‘पुल बनाउने बेला बीच भागमा माटो भेटिएन’– उहाले भन्नुभयो– ‘डिजाइनरले किर्ते कागज पेश गरेका रहेछन्।’ कागजमा एउटा र काम गर्ने ठाउ अर्को भएपछि निर्माण गर्न नसकिएको उहाले बताउनुभयो।
गत साउनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय प्युठानमा सर्वदलीय बैठक बसी पुल निर्माण गर्न नसक्ने भनी निवेदन पेश गरेको उहाले बताउनुभयो। हालसम्म पुलको वारीपारी पिलर उठाउने, जाली भर्ने र पुल बनाउनको लागि बाटो निर्माण कार्य मात्र भएको उहॉले बताउनुभयो।
उता जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालय प्युठानका प्रमुख इञ्जिनियर नवीन श्रेष्ठले उक्त ठाउमा बलौटे माटो भए पनि पुल निर्माण गर्न सकिने बताउनुभयो।
‘ओपन फाउण्डेसन अनुसार काम गर्न सकिन्छ’– उहा“ले भन्नुभयो– ‘निर्माण व्यवसायीले उक्त स्थानमा पुल निर्माण गर्न सकिदैन भनेर निवेदन पेश गर्नुभएको छ।’ पुरानो डिजाइन अनुसार नै पुल निर्माण गर्न सकिने इञ्जिनियर श्रेष्ठले दाबी गर्नुभयो।
पुल नबन्दा आठजनाको ज्यान गयो
पुल नबन्दा स्थानीयलाई आवतजावत गर्न असहज हुने मात्र हैन धेरैले खोलामा ज्यानसमेत गुमाउनुपरेको छ। ‘झिमरुक खोला वर्षातको समयमा ठूलो आउ“छ’– स्थानीय हरि जिसीले भन्नुभयो– ‘खोलामै परी आठजनाले ज्यान गुमाएका छन्।’ कतिका आसु बगेका छन्, त कतिलाई खोलाले त्रास बनाएको उहाले बताउनुभयो। ‘खोला आयो भनेर काम रोक्न भएन, आवतजावत गर्नैप¥यो’– उहा“ले भन्नुभयो– ‘अझै कतिले ज्यान गुमाउनुपर्ने हो थाहा छैन।’
निर्माण कार्य शुरु भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि पुल निर्माण कार्य सम्पन्न नभएपछि यो पुल बन्छ भन्ने आशा नै मरेको उहॉले बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायी र डिजाइनरसगको तालमेलमा पुल नबन्दा राज्य जवाफदेही नभएको स्थानीय बताउछन्।
Previous: पोशाकमै खुसुक्क भारतीय प्रहरी
Next: जनताको लगानीमा विद्युत उत्पादनको तयारी